Itekhnoloji yokusetyenziswa kwemiyalezo inokuxabisa i-Apple 2.800M | IPhone iindaba
U-Apple kuya kufuneka aye enkundleni kwakhona: inkampani I-Voip-pal uye wazisa ngokusemthethweni yintoni uya kutyhola iApple nge-2.800 yezigidi iidola kumonakalo welungelo elilodwa lomenzi wethekhnoloji yonxibelelwano ye-Intanethi. Ummangali uthi itotali iyonke sisiphumo se-1.25% yeeroyalties yezixa ezilinganiselweyo ezifunyenwe yiApple kwiimveliso zayo ezisebenzisayo, ngaphezulu kwako konke, imessage. Kule pesenti, i-Voip-pal ibalwe i-55% kwi-iPhone, i-35% kwi-iPad kunye ne-10% kwi-Mac.
I-Voip-pal inamalungelo awodwa omenzi wechiza ekushukumiseni, phakathi kwabo bazama ukophula umthetho okanye ukulinda, kodwa uninzi lwalawo malungelo abenzi ahambelana netekhnoloji yenkqubo ye-intanethi. Ngokwenkampani, iApple ayophuli nanye, ukuba ayininzi kulawo malungelo obunini kwisoftware efana neMessage kunye Ixesha lokujonganaOkwesibini ukwenza iminxeba simahla kunye nevidiyo phakathi kwezixhobo zeApple.
iMessage kunye neFaceTime, isizathu esitsha semfuno
Ngokukodwa, izixhobo ezisebenzisa usetyenziso lweMessage ziqala unxibelelwano phakathi komntu ofowunayo kunye nomamkeli. Umamkeli unokuba ngumbhalisi kwiApple okanye ongabhalisi. Kwimeko apho umamkeli ngumbhalisi we-Apple, unxibelelwano luthunyelwa kusetyenziswa iMessage. Kwelinye icala, ukuba umsebenzisi akangomrhumo we-Apple okanye ukuba iMessage ayifumaneki, unxibelelwano luya kuthunyelwa ngeSMS / MMS. Inkqubo yemiyalezo ka-Apple ngokuthe ngqo kunye / okanye ngokungangqalanga yenza amabango athile e-815 patent ukumisela ukuhlelwa komsebenzisi kwaye, ngenxa yoko, indlela ekufuneka iphathwe ngayo umnxeba.
UVoip-pal uhambise uxwebhu lwetyala ngoFebruwari 9, kodwa wayekwincoko noApple ngaphandle kweenkundla ukubona ukuba bangafikelela kwisivumelwano, besiza kuqwalasela umbono wokuthengisa okanye ukunika ilayisenisi ipotifoliyo yelungelo elilodwa lomenzi. Inkqubo ye- Inkampani ithi ayisiyo isosha ilungelo elilodwa lomenzi wechiza, nangona ingenzi naluphi na uhlobo lwenzuzo kunye nabo kwaye ikwammangalele ezinye iinkampani ezinje nge-AT & T okanye iVerizon.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Itekhnoloji yokusetyenziswa kwemiyalezo inokuxabisa i-Apple 2.800M